Wadahadalada Puntland iyo Galmudug ee Gaalkacyo oo Weli Socda iyo Xaalka Gaalkacyo – Radio Daljir
Seteembar 7, 2017 4:03 g 1
Gaalkacyo waxaa maalmihii la soo dhaafay shir uga socday maamulada Puntland iyo Galmudug, waxaana shirku ka socdaa hoolka shirarka ee Xarunta Xaawo Aadan. Illaa iyo hadda ma ay jiraan wax war ah oo loo dhanyahay iyo wax heshiis ah oo ka soo baxay shirka.
Shirka waxaa ka qaybagalaya madaxda maamulada Puntland iyo Galmudug, odayaasha dhaqanka, waxgaradka iyo bulshada deegaanka. Sida ay noo sheegeen ilo xogogaal ahi, waxaa la filayaa in xilliyada soo socda ay kuxigeenada Madaxwaynayaashaa labada maamul soo sari doonaan qodobo la isku afgartay.
Madaxda ka qaybgalayska shirka ayaa hore u sheegtay in shirku socon doono illaa laga gaarayo hadafkii loo qabatay shirka.
Ma ahan markii ugu horaysay oo shir noocan oo kale ah lagu qabto Gaalkacyo, ayada oo xal loogu raadinayo colaadda Gaalkacyo. Laakiin illaa iyo hadda xal looma helin colaadda Gaalkacyo.
Siyaasiyiinta deegaanka oo aan qaarkood wax ka weydiinay shirka ayaa Daljir la qaybsaday in shirka maanta ee Gaalkacyo uusan waxba ka badalayn xaaladda magaalada, ayaga oo raaciyey in “labada maamul ee magaalada Gaalkacyo aysan midkoodna ka go’in talada Gaalkacyo.”
Siyaasiyiinta aan wax ka weydiinay xaaladda Gaalkacyo ayaa ku sii daray in “ammaanka Gaalkacyo uu hadda laba qolo oo kaliya faraha ugu jirto, waana Ciidamada Ammaanka Puntland (PSF) iyo huggaanka Al-Shabaab ee ka hawlgala Gaalkacyo.”
Oday dhaqameed ka gaabsaday in magaciisa aan warino oo aan wax ka weydiinay khilaafka maamulada iyo PSF-ta waxa uu noogu jawaabay, “PSF iyo maamulada dawliga ah ee Gaalkacyo ma aha isku hadaf, isku sina wax uma arkaan, war jiraana cakaaru iman.”
Magaalada Gaalkacyo oo indhawaalaba aysan ka jirin colaad muuqata, ayaa sannadkaan 2017 gashay waji ka duwan wajiyadii hore, iyo kooxaysi aan hore uga jirin deegaanka, ha ahaato mid maamul, mid dhaqan, iyo mid ciidamo ammaan, iyo waliba ururka Al-Shabaab oo hadda noqday awood soo korortay oo aan la iska indhatiri karin.
Martisoor: Quraanjecel iyo Waayihiisii Nolosha, Wasiirnimada iyo Waliba Waxqabadkii Xukuumadda (dhegayso)
Waxaad qayb ka tihiin amni darada gobolka mudug maxaa yeelay idaacad qaab nin jeclaysi ah u shaqaysa ayaaa tihiin